New York Times: Maraykanku waxa uu ku dilay Iraq iyo Syria 3,100 qof oo rayid ah - Horn Future
Wargayska New York Times ayaa sheegay in ugu yaraan 3,100 qof oo rayid ah ay ku dhinteen kadib duqeeymo xagga cirka ah oo Maraykanka ka gaystay Iraq iyo Syria tan iyo markii uu bilaabay dagaalka ka dhanka ah ururka ISIL 2014.
Wargeyska ayaa tilmaamay in ciidamada Mareykanka ay bixiyeen qiyaaso aad u yar markii ay sheegeen in weeraradoody inay sababeen kaliya dhimashada 352 qof oo rayid ah.
New York Times ayaa soo xigtay baadhitaan uu sameeyay ururka aan dawliga ahayn ee (AirWars) ee xaruntiisu tahay magaaladda London kaas oo ururiyey xog la faafiyay oo kusaabsan tirada waxyeellada soo gaadhay dadka rayidka ah,waxana tirada dhimashada dadka rayidka ah ay siddeed goor ka badan tahay tan uu xaqiijiyay Maraykanku.
Sida laga soo xigtay tirakoob ururkan,tirada dhimashada dadka rayidka ah ee lagu dilay intii lagu guda jiray rubucii u horeeyay ee sanadka 2017 ayaa heerkeedu si weyn kor ugu kacday marka la barbar dhigo wakhtiyadii hore.
Wargeyskan ayaa cadeeyay in hawlgalladan ciidan ee la xidhiidha si loo qabsado fadhiisimaha ururka ISIL sida magaaladda Mosul iyo Raqqa ay door muhim ah ka ciyaareen tirada dhimashada kor u kacday.
Waxa uu tilmaamay in madaxda ciidamadu ay heleen xorriyad weyn oo ay ku gaadhaan go’aamo ku saabsan duqeeymaha cirka ee Syria iyo Iraq maalmihii ugu dambeeyay ee maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, isbaddilkan oo uu si weyn dardar u galiyay sannadkan maamulka madaxweyne Donald Trump.
Ururka Airwars ayaa daaha ka fayday xog uu kasoo xigtay saraakiil katirsan ciidamada Maraykanka ah in wadamada isbahaysigu ay ku qaadeen in ka badan 4 kun oo duqeeymo cirka ah oo wadajir ah dalalka Iraq iyo Syria kuwaas oo oo inta badan ay fuliyeen Britain, France, Australia, Belgium iyo Netherlands.
Waxa ururkani uu sheegay in dowladda Mareykanku ay ka caawisay isbaahaysigeega in la daboolo tirada dadka rayidka ah ee u dhintay sababaha duqeeymahan,waxana isbaahaysigan uu cadaadis ku saaray Maraykanka si looga hortaggo in la faafiyo faahfaahinta weeraradan.
Warbixinta ayaa soo jeediyay in mid ka mid ah cawaaqibka maamuuska isbahaysiga cusub ee ah aqoonsiga dhibanayaalka rayidka ah ay tahay in hufnaanta Maraykanka ee dagaalka ka dhanka ah ururka ISIL laga yaabo inay la kulanto halis.
« Maraykan mindi ku dilay 2 nin oo isku dayday inay u hiiliyaan 2 gabdhood oo Muslimiin ah	» Hilibka cas waxa uu kordhin karaa halista dhimashada ee cuduro dhowr ah